"ဟဲဟိုး လေဆိပ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ဟဲဟိုး လေဆိပ်" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ဟဲဟိုး လေဆိပ် (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၃:၂၀၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၂၄၁၄ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၁ နှစ်
၀၄:၁၈၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (→‎လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ပျံသန်းရာမြို့များ)
၁၃:၂၀၊ ၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
== မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု ==
* ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်အမှတ် ၁၁ သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်ချိန်တွင် မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်အတွင်း ပါရှိသော ခရီးသည် (၁) ဦး နှင့် မြေပြင်ပေါ်ရှိ ဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ <ref> https://aviation-safety.net/database/record.php?id=20121225-0
* ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းမှ Fokker F-27 Friendship 200 အမျိုးအစားလေယာဉ်သည် ဟဲဟိုးလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာစဉ် တောင်နှင့် ဝင်တိုက်မိပြီး လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၄၅ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရသည်။<ref>https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19870621-1</ref>
* ၁၉၈၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဗမာ့လေကြောင်းလိုင်းပိုင် Fokker F-27 Friendship 500 အမျိုးအစားလေယာဉ်သည် အမြင့်ပေ ၁၅၀၀ရှိ တောင်တစ်လုံးနှင့် ဝင်တိုက်မိကာ လေယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၄၉ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရသည်။၎င်းအဖြစ်အပျက်သည် မြန်မာ့လေကြောင်းသမိုင်းတွင် ဒုတိယအသေအပျောက်အများဆုံး လေကြောင်းမတော်တဆမှုဖြစ်သည်။သေဆုံးသူများထဲမှ ၃၆ဦးမှာ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၁၄ဦး၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား ၇ဦး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၅ဦး၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ၄ဦး၊ အနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံသား ၃ဦး၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား ၂ဦး နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးတို့ပါဝင်သည်။<ref>http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19871011-2</ref> <ref>[https://www.nytimes.com/1987/10/12/world/crash-of-airliner-in-burma-kills-49-14-from-us.html "CRASH OF AIRLINER IN BURMA KILLS 49, 14 FROM U.S." ]New York Times. 12 October 1987. Retrieved 13 March 2016.</ref>
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/531165" မှ ရယူရန်